काठमाडौंसहित अन्य जिल्लाबाट चितवन लगिँदै कोरोना संक्रमित, कति छन् शय्या? के छ अक्सिजनको अवस्था? :: स्वास्थ्य खबरपत्रिका
कमला गुरुङ सोमबार, वैशाख २७, २०७८, ०६:३२:००
काठमाडौं- काठमाडौं सहित देशभरका अधिकांशजसो अस्पतालहरु भरिभराउ छन्। बढ्दो कोरोना संक्रमणका कारण शय्या पाउन निकै मुश्किल छ।
शय्याका लागि बिरामीहरु भौतारिदै हिडिरहेको दृश्य अहिले अधिकांश अस्पतालमा देख्न सकिन्छ। शय्याको खोजीमा बिरामीहरु एक जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा घुमिरहेका छन्।
जसमध्ये अहिले चितवन एक यस्तो जिल्ला बनेको छ, जहाँ कोरोनाका बिरामीहरु उपचारका लागि पुग्ने गरेका छन्। हालसम्म अक्सिजन र शय्याको अभाव नरहेको भन्दै अन्यत्र जिल्लाले संक्रमित चितवन पठाउने गरेका छन्।
स्वास्थ्य कार्यालय चितवनको तथ्यांकले पनि चितवनबाहिर बाट संक्रमित उपचारका लागि आइरहेको पुष्टि गर्छ। यहाँ हाल ३९० जना कोरोना संक्रमित उपचाररत छन्। जसमध्ये करिब ५० प्रतिशत अर्थात् लगभग १९५ जना संक्रमित जिल्ला बाहिरका छन्।
हुन त नवलपुर, मकवानपुर, तनहुँ, लमजुङ, गोरखा, कास्की र धादिङको तल्लो भेगका नागरिकहरु उपचारका लागि चितवनमै निर्भर हुन्छन्। उनीहरु अन्य बेला पनि नियमित स्वास्थ्य सेवाका लागि चितवनमै पुग्ने गर्छन्। तर हाल भैरहवा, काठमाडौं, नेपालगञ्ज, दाङ लगायत जिल्लाबाट रिफर भएर कोरोना संक्रमित उपचारका लागि आउने गरेको स्वास्थ्य कार्यालय चितवनका प्रमुख दीपक तिवारी बताउँछन्।
उनी भन्छन्, ‘यी छिमेकी जिल्लाका बिरामीहरु उपचारका लागि चितवनमै निर्भर हुने हो। तर केही दिन यता अन्य जिल्लाका संक्रमितहरु शय्या र अक्सिजनको अभाव भएको भन्दै आइरहेका छन्। धेरैजसो लुम्बिनी प्रदेशका केसहरु बढी छन्।’
छैन अक्सिजनको अभाव
काठमाडौं सहित देशका विभिन्न अस्पतालमा अक्सिजनको हाहाकार छ। अहिले कोरोना संक्रमितको मृत्युको मुख्य कारण नै हो, अक्सिजनको अभाव। तर चितवनमा भने हाल अक्सिजनको अभाव छैन।
कोरोनाको उपचार हुने भरतपुर अस्पताल, कलेज अफ मेडिकल साइन्सेज र चितवन मेडिकल कलेजको आफ्नै अक्सिजन प्लान्ट छ। त्यसैले पनि हालसम्म अक्सिजनको अभाव नरहेको कार्यालय प्रमुख तिवारीले बताए।
उनले भने, ‘हालसम्म यहाँ अक्सिजनको अभाव छैन। तर हामी अरुलाई दिन पनि त्यति सक्दैनौ। यहाँको बिरामीलाई पुग्ने मात्र छ। सकारात्मक कुरा भनेको यी तीन वटै अस्पतालमा आ–आफ्नै अक्सिजन प्लान्ट भएकाले पनि थप सहज भएको छ।’
संक्रमणको दर बढ्न थालेपछि आउन सक्ने जटिल परिस्थितिलाई चितवनले आँकलन गरिसकेको थियो। त्यसैले अक्सिजनको अभाव हुन नदिन एक महिना अघिदेखि नै गृहकार्यमा जुटेकाले हाल अक्सिजनको अभाव नरहेको उनी बताउँछन्।
‘हामीले अक्सिजन अभाव हुन नदिन एक महिनाअघि देखि नै गृहकार्य गरेका थियौँ।’ उनले भने, ‘वैशाखको सुरुदेखि नै अक्सिजनको माग आपूर्ति के कसरी भइरहेको छ भनेर नै बुझिरहेका थियौ। व्यवसायीहरुसँग पनि समस्या र समाधानको बारेमा निरन्तर छलफलमा थियौँ।’
बाहिरका थप बिरामी लिन नसक्ने अवस्थामा पुगिसक्यौँ
चितवनमा हाल दैनिकजसो २५० को हाराहारीमा संक्रमित भेटिने गरेका छन्। हालसम्म यहाँ अक्सिजनको अभाव त छैन तर शय्या विस्तारै भरिदै गएका छन्। यही गतिमा संक्रमितको संख्या दैनिक बढ्दै गए बिरामीको चाप थेग्न मुश्किल पर्ने तिवारी बताउँछन्।
बाहिरी जिल्लाबाट संक्रमित आउने क्रम बढ्न थालेपछि कोरोनाको उपचार हुने अस्पतालहरुले पनि थप बिरामी भर्ना लिन नसक्ने बताउन थालेको उनले बताए।
‘हाल अक्सिजन अभाव छैन। तर बाहिरबाट बिरामी आउन थालेपछि बेड भरिन थाल्यो। अहिलेको अवस्था हेर्दा अस्पतालहरुले पनि अब नसकिने भो भन्न थालेका छन्। यहीँ जिल्लामा पनि बिरामीहरु बढ्दै गयो भने हामीलाई गाह्रो हुन्छ’ उनले भने।
जटिल खालका बिरामी मात्र रिफर गर्न स्थानीय तहलाई तिवारीको आग्रह छ। सामान्य खालको संक्रमितलाई त्यही नै प्राइमरी केयर गरेर आफैँ व्यवस्थापन गर्न सकिने उनले बताए।
उनी आग्रह गर्दै भन्छन्, ‘नजिकका जिल्लाबाट आइरहेका संक्रमितहरुलाई प्राइमरी केयर गरेर आफँै व्यवस्थापन गरिदिनुस्। सामान्य बिरामीलाई नपठाइदिनुस्। जटिल अवस्था भएका बेलामा मात्र रिफर गरिदिनु भनेर हामीले अनुरोध गर्ने गरेका छौं। उहाँहरुले व्यवस्थापन गर्न सक्ने केस पनि यहाँ आइदियो भने यहाँ हामीलाई भीड व्यवस्थापन गर्न गाह्रो हुन्छ।’
अन्य जिल्लाका स्थानीय तहले समन्वय गरे बिरामीको उपचार व्यवस्थापन गर्न सहज हुने उनले बताए। सबै खालका बिरामी चितवनमै रिफर गर्दा जटिल खालका बिरामी उपचारबाट बञ्चित हुने अवस्था आउन सक्ने उनी बताउँछन्। बिरामीको संख्या बढ्दै गए जिल्लामा भएका जनशक्ति र शय्याले थेग्न नसक्ने उनले बताए।
उनले भने, ‘अरु जिल्लाले पनि जिम्मेवारी लिनुपर्छ। कोभिड भन्ने बित्तिकै हामीलाई मात्र पन्छाएर पनि हुँदैन। हिजो ३ सय बेड सञ्चालन गर्दा पनि पुगेको थियो। आज करिब ६ सय बेड चलाउँदा पनि पुग्दैन। बेड थपेर मात्र हुँदैन। त्यही अनुसारको जनशक्ति पनि आवश्यक पर्छ।’
बिरामीको संख्या बढीरहँदा अस्पतालहरुको शय्या क्षमता बढाउने तर्फ पनि लागिरहेको उनले बताए। उनका अनुसार प्राइमरी केयर व्यवस्थापनका लागि स्थानीय तहरुमा आइसोलेसन सेन्टर स्थापना गरिएको छ।
कोरोनाको उपचारमा निजी अस्पतालहरुसँग सहकार्यको लागि पनि छलफल भइरहेको उनले जानकारी दिए।
भरतपुर अस्पतालमा ५५ प्रतिशत बिरामी बाहिरी जिल्लाका
बाहिर जिल्लाका संक्रमितहरु उपचारका लागि आइरहँदा यहाँका अस्पतालहरुलाई समस्या परेको छ। कोभिडका लागि छुट्याइएका शय्याहरु भरिदै गएका छन्।
भरतपुर अस्पतालमा हाल उपचार भइरहेका संक्रमितमध्ये ५५ प्रतिशत बढी बिरामी बाहिर जिल्लाका रहेको अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेण्डेन्ट डा जगन्नाथ तिवारीले बताए। अस्पतालमा कोभिडका लागि छुट्याइएका शय्याहरु सबै भरिएको उनले बताए।
‘बाहिरका बिरामी आउँदा हामीलाई धेरै समस्या भएको छ’ उनले भने, ‘हामीले छुट्याएका बेडहरु पुगेको छैन। छिमेकी जिल्लाहरुले उता बेड पाइएन भन्दै चितवन पठाउने गरेका छन्।’
अन्यत्र जिल्लाबाट सामान्य र जटिल दुवै खालका बिरामीहरु अस्पताल आउँदा व्यवस्थापनमा समस्या भएको उनले सुनाए। यसले गर्दा चितवनवासीलाई उपचार सेवा दिन नसकिएको उनले बताए। सामान्य खालका बिरामीलाई जिल्लामा उपचार गरी जटिल खालका बिरामी मात्र रिफर गर्न उनको पनि आग्रह छ।
‘अरु जिल्लाबाट सामान्य र जटिल दुवै खाले बिरामी पठाइरहेका छन्। प्रत्येक जिल्लाले जिम्मेवारी लिएर सामान्य खालको बिरामीको उतै उपचार गर्न सक्छन्’ उनले भने।
हाल अस्पतालको सबै शय्या बिरामीले भरिएकाले थप नयाँ बिरामी भर्ना नलिएको उनले बताए।
कुन अस्पतालमा कति छन् शय्या?
जिल्लाको सरकारी भरपतुर अस्पताल, कलेज अफ मेडिकल साइन्सेज, चितवन मेडिकल कलेजमा कोभिडको उपचार हुँदै आएको छ। यी तीन वटा अस्पतालमा मात्र कोभिडका लागि ५९८ शय्या उपलब्ध छ। जसमध्ये २८३ आइसीयू, १२५ एचडीयू छन्।
भरतपुर अस्पताल (१४५) – १० आइसीयू, २५ एचडीयू, जेनरल बेड ११०
चितवन मेडिकल कलेज (२५३) – १८३ आइसीयू, ७० एचडीयू
कलेज अफ मेडिकल साइसेन्ज (२००) – ९० आइसीयू, ३० एचडीयू, जेनरल बेड ८०
बिपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पतालले पनि २० शय्याको व्यवस्था गरेको छ। अस्पतालले मात्र नभई चितवनका विभिन्न स्थानीय तहहरुले कोरोना संक्रमितको उचपारका लागि शय्या र अक्सिजनको व्यवस्था गरेको छ।
माडी नगरपालिकाले ५ अक्सिजन सिलिण्डर सहित १० शय्या, रत्ननगर नगरपालिकाले २८ अक्सिजन सिलिण्डर सहित शय्या, खैरहनी नगरपालिकाले ११ अक्सिजन सिलिण्डर सहित १५ शय्या, राप्ती नगरपालिकाले अक्सिजन सिलिण्डर सहित २०, कालिका नगरपालिकाले अक्सिजन सिलिण्डर सहित १२ र इच्छाकामना गाउँपालिकाले १० अक्सिजन सिलिण्डर सहित २० शय्याको व्यवस्था गरेको छ।
कोरोनाको उपचार हुने मुख्य तीन अस्पताल सहित स्थानीय तहको शय्या जोड्दा जिल्लाभर ७२३ शय्या कोरोनाको लागि उपलब्ध रहेको स्वास्थ्य कार्यालयले जनाएको छ।
कुल ३९० संक्रमितमध्ये हाल १७२ जना आइसीयू, ४१ जना भेन्टिलेटर, ५० जना एचडीयू र बाँकी मोडरेडेट बिरामी छन्। जसमध्ये भरतपुर अस्पतालमा १७३, चितवन मेडिकल कलेजमा १५३ र कलेज अफ मेडिकल साइन्सेजमा ६६ जना संक्रमित उपचाररत छन्। अन्य अस्पतालमा ३४ जना उपचाररत रहेको कार्यालयको तथ्यांक छ।
पाँच सय बढी सक्रिय संक्रमित रहेका जिल्लामध्ये चितवन पनि एक हो। चितवनमा हाल कुल संक्रमितको संख्या ९ हजार ५ सय १९ पुगेको छ।
२ हजार ३ सय १३ जना आइसोलेसनमा छन्। जसमध्ये संस्थागत आइसोलेसनमा १७६ जना छन् भने होम आइसोलेसनमा २ हजार १ सय ३७ जना छन्। १३८ जनाको मृत्यु भइसकेको छ।
हालसम्म ७ हजार ६८ जना उपचारपछि निको भएको स्वास्थ्य कार्यालय चितवनको तथ्यांक छ। सबैभन्दा धेरै संक्रमित भरतपुर महानगरपालिकामा भेटिएको छ। यहाँ मात्र कुल संक्रमितको संख्या ७ हजार १ सय ५२ जना पुगेको छ भने १२८ जना संस्थागत आइसोलेसन, १ हजार ७ सय ७६ होम आइसोलेसनमा छन्।
जम्मा संक्रमित – ७१५२, अस्पताल आइसोलेसन – १२८, होम आइसोलेसन – १७७६, आइसोेलसन – १९०४, डिस्चार्ज – ५१६२, मृत्यु – ८६
जम्मा संक्रमित – ५०२, अस्पताल आइसोलेसन – ११, होम आइसोलेसन – ६५, आइसोेलसन – ७६, डिस्चार्ज – ४१७, मृत्यु – ९
जम्मा संक्रमित – २०४, अस्पताल आइसोलेसन – ४, होम आइसोलेसन – ४७, आइसोेलसन – ५१, डिस्चार्ज – १४९, मृत्यु – ४
जम्मा संक्रमित – ९८६, अस्पताल आइसोलेसन – १९, होम आइसोलेसन – १५९, आइसोेलसन – १७८, डिस्चार्ज – ७९१, मृत्यु – १७
जम्मा संक्रमित – ३८३, अस्पताल आइसोलेसन – ८, होम आइसोलेसन – ४७, आइसोेलसन – ५५, डिस्चार्ज – ३१७, मृत्यु – ११
जम्मा संक्रमित – २४३, अस्पताल आइसोलेसन – ५, होम आइसोलेसन – ३५, आइसोेलसन – ४०, डिस्चार्ज – १९३, मृत्यु – १०
जम्मा संक्रमित – ४९, अस्पताल आइसोलेसन – १, होम आइसोलेसन – ८, आइसोेलसन – ९, डिस्चार्ज – ३९, मृत्यु – १
स्रोत: स्वास्थ्य कार्यालय चितवन